ओलीलाई विस्थापित गर्न कस्सियो माओवादी, जसपा पनि बार्गेनिङ गर्दै - नेपालबहस
ओलीलाई विस्थापित गर्न कस्सियो माओवादी, जसपा पनि बार्गेनिङ गर्दै
| १५:०२:५० मा प्रकाशित
२६ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प तत्काल आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । तर परिस्थिति परिपक्व नभई ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने रणनीति बनाएको छ ।
आज पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दलसँग सहमति र सहकार्य जरुरी भएको ठहर गरेको छ । साथै, यस प्रयोजनका लागि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
अब तत्कालै नेपाली कांग्रेस र जसपासँग औपचारिक रुपमै यसबारे घनिभूत छलफल गरिने जानकारी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिए । साथै, उनले ओली सरकारलाई दिइरहेको समर्थन हाललाई यथावत रहने पनि बताए । यसको कारण खुलस्त गर्दै उनले भने–समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले ३० दिन विश्वासको मत लिने समय पाउने छन् । तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा एक सातामै ओलीमुक्त सरकार बनाउन सकिने भएकाले हतार नगरेका हौं ।
आजैबाट माओवादीले कांग्रेस र जसपासँग औपचारिक रुपमै छलफल गर्ने जानकारी उनले दिए । जसपाले पनि पाँच सदस्यीय वार्ता टोली हिजै गठन गरेको छ । तर नेपाली कांग्रेसले भने अझै कुनै टोली बनाएको छैन । अझै पर्ख र हेर कै अवस्थामा कांग्रेस रहेको देखिन्छ ।
उता, ओलीले धेरै भर गरेको जसपा पनि उनका लागि त्यति सहज देखिंदैन । किनभने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीमैत्री छैनन् ।साथै, ओलीले भर गरेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसमेत ओलीप्रति धेरै विश्वस्त छैनन् । विगतमा ओली सरकारलाई समर्थन गर्दा धोका मात्र दिएको बुझाई उनीहरुको छ ।
आज संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा नेता महतोले प्रष्टै भने–ओलीजीप्रति भर छैन । किनभने उनमा ठग्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रा माग पूरा नभएसम्म कसैले आश्वासन दिएको भरमा सरकारमा जाने कुरा छैन ।
जसपाले हत्या आरोपी सांसद रेशम चौधरीको तत्काल रिहाई र संविधान संशोधनलाई बटम लाइन बनाएको छ । ओली उनीहरुको माग पूरा गर्न सकारात्मक रहेको बुझाई उनीहरुको रहेको छ । तर अब उधारोमा होइन सबै काम नगदमै हुनुपर्छ – नेता महतोले भने ।
ओली बाहेक अर्काे गठबन्धन पनि बन्न सक्ने सम्भावना उनले अस्वीकार गरेनन् । तर हाम्रा माग पूरा भएन भने अर्काे गठबन्धन बन्न सक्छ – उनले भने ।
निर्णायक छलफलमा जुटदै कांग्रेस र माओवादी १६ घण्टा पहिले
कांग्रेसको निर्वाचन समिति संयोजकमा महादेवप्रसाद यादव १ दिन पहिले
मलेसियामाथि नेपालको फराकिलो जित, शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा प्रवेश ८ घण्टा पहिले
ग्रामीण सडकको विशेषता हिउँदमा धुलो,बर्खामा हिलो १५ घण्टा पहिले
बुटवलमा अर्घाखाँचीकी संक्रमित महिलाको मृत्यु ६ दिन पहिले
प्रचण्ड र नेपालले टाउकोमा हानेर रन्थन्याउने गराएको ओलीको टिप्पणी १३ घण्टा पहिले
खुशीको खबर ! अब छोराछोरी जन्माए तीन हजार पाइने ४ दिन पहिले
जीतगढीमा नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको विजय उत्सव २ दिन पहिले
हत्या र लुटपाटमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउछौ : कानूनमन्त्री यादव ७ दिन पहिले
संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुँदै ३ हप्ता पहिले
हेटौँडा अस्पतालमा क्यान्सर पत्ता लगाउनका लागि परीक्षण सेवा १ हप्ता पहिले
झापामा जनगणनाका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीम ४ हप्ता पहिले
२३ वर्षअघि सामूहिक लगानीमा किनेको डोजर कवाडी बन्दै ४ दिन पहिले
व्रतालु भक्तजन ९ महिना पहिले
सरकारले गर्याे फेरि कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा नाैटंकी निर्णय ५ महिना पहिले
एभरेष्ट बैंकमा नयाँ संचालक नियुक्त ८ महिना पहिले